HORDHAC: Real Betis Vs Real Madrid Los Blancos Oo Kulankanii Guul Ama Geeri U Yahay Iyo Santiago Solari Oo Madax Xanuun Wayni Ka Haysto Dhaawacyada Kooxdiisa Madrid | Tygpress
HORDHAC: Real Betis Vs Real Madrid- Los Blancos Oo Kulankanii Guul Ama Geeri U Yahay Iyo Santiago Solari Oo Madax Xanuun Wayni Ka Haysto Dhaawacyada Kooxdiisa Madrid.
Real Madrid ayaa xili ciyaareedkan si wayn ugu soo dhibtoonaysay horyaalka la liga waxayna haddaba 10 dhibcood hoos uga dhacday kooxda hogaaminaysa horyaalka La liga ee Barcelona waxayna Los Blancos wali ka baxsan tahay afarta kaalmood ee sare ee Champions league loogu soo baxo.
Santiago Solari ayaa dareemaya culayska kursiga kaydka Real Madrid ee ay tababarayaasha badani ku soo dhibtooteen, wuxuuna kulanka Real Betis ku qasban yahay in uu natiijo fiican oo guul ah kala soo laabto si uu culayska wayn iskaga kala yareeyo.
Intii lagu jiray sanadkan cusub ee 2019 ayayna Real Madrid wali guulaysan kulan horyaalka ah iyada oo kulankii ugu danbeeyay Bernabeu guuldaro kaga soo gaadhay kooxda Real Sociedad halka kulankii ka horeeyay ay barbaro la gashay kooxda in ay heerka labaad u dhacdo ka cabsida qabta ee Villarreal.
Laakiin Solari iyo kooxdiisa Madrid ayaa imtixaan adag ku mari doona kulanka Real Betis iyada oo waliba xaalada dhaawacyada Madrid ay aad u sii bateen maalmihii la soo dhaafay.
Real Madrid waxaa kulanka Real Betis dhaawacyo kaga maqnaan doona xidigaha kala ah Toni Kroos, Gareth Bale, Marco Asensio, Marcos Llorente, Mariano Diaz halka Lucas Vazguez uu ku seegi doono ganaaxa kaadhkii casaa ee uu qaatay kulankii Real Sociedad.
Santiago Solari ayaa xaqiijiyay in da’yarka kooxdiisa ee Vinicius Jr in uu xanuun Virus ahi ku dhacay isla markaana ay su’aali saaran tahay haddii uu taam u noqon karo kulanka Betis taas oo weerarka Madrid ku soo koobi karta Karim Benzema oo kaliya.
Goolhaye Courtois ayaa ka mid ah ciyaartoyda Madrid dhaawaca kaga maqan taas oo la micno ah in Keylor Navas uu haysto fursad uu goolka Madrid ugu soo bilaaban karo kulan La liga ah kadib markii shaqadiisa lagu soo koobay kulamadii Copa Del Rey iyo Champions league.
Ugu danbayn Solari ayaa ku qasbaan doona in uu shaxdiisa kulanka Real Betis ku soo bilaabo xidiga uu bahdilaada badan ku soo sameeyay ee Isco kaas oo haysta fursadii ugu waynayd ee uu shaxda kooxdiisa ugu soo bilaaban lahaa.
Kooxda martida loo yahay ee Real Betis waxaa dhaawac kaga maqnaan doona difaaca dhexe ee Sidnei si la mid ah difaac danbeedka Junior Firpo laakiin Betis ayaa sidoo kale tartanka Asia Cup u wayday adeegii xidiga khadka dhexe ee Takashi.
Tartanka: Kulanka 19 aad ee La Liga
Kulanka: Real Betis Vs Real Madrid
Garoonka: Benito Villamarin Stadium
Shaxda Macquul Ee Real Madrid Kala Hortagi Karto Betis.
Si cajiib ah waxaa waayahaan u soo koraya warshaddaha dharka astaanta u ah ummadda muslimka, gaar ahaan haweenka. Xaliima Aaden oo ah gabadh Soomaali-Americaan ah, ayaa noqotay gabadhii ugu horeysay ee “xijaaban” oo ku tartamta quruxda gabdhaha Maraykanka 2016kii. Xaliima Aaden waxay cagta ku dhufatay dhowr soohimood oo lagu hakinayay gabdhaha muslimka ah. Waxaa loo […]
Dowladda Soomaaliya oo Billaawday Hab-raaca Ciidamada Ahlu-sunna Lagu Qarameynayo
Ra’iisul Wasaaraha Xukumadda federalka Soomaaliya ayaa xerada qaybta 21-aad ee xoogga dalka Soomaaliyeed ku booqday Ciidamo ka tirsan ahlu sunna oo lagu wareejiyey Dowladda Federaalka, maantana loo bilaabayo Hab-raaca ay kaga midnoqonayaan Ciidanka Qalabka sida ee Qaranka. Ra’iisul Wasaaraha oo ay booqashadiisa ku wehliyeen madaxa fulinta Galmudug iyo taliyaasha ciidanka qalabka sida ayaa khudba u […]
Ninkii Balayax ahaa markuu habeen ku baryay xabsigii Jabuuti, ee subixii albaabka laga furay xilligii qureecda, ayuu go’aan ku gaadhay in uu baxsado, ka dibna illayn, waa nin tababar kumaandoos soo qaataye, intuu afar nin oo jeelka ilaalinaysay, looto ku wareeriyay ayuu gidaar ka booday, oo taw yidhi. Hase yeeshee, askar ayaa ka daba yaacday, […]
Ma guuleysatay? Su’aalaha ugu muhiimsan ee dadka reer Britain is weydiiyaan iyagoo weliba ka fiirsanaya shaashada natiijada ee garoonka koowaad ee tartanka Tenniska ee Wimbledon si ay u hubiyaan sii socoshada riyada Cori Gauff oo 15 sano jir ah. Taageerayaal badan ayaa magaceeda ku qaylinayey kadib markii ay ka badisay gabadha reer Slovenia Polona Hercog […]
QISO CAJIIB AH OO KA DHACDAY BURCO.
Burco iyo dadkeeduba waa dad wax waynka yaqaana jacayl.
SIDEE LA ISKAGA DAAWEEYAA WALBAHAARKA AMA STRESS KA? SIDEE AYUU WALBAHAARKU AMA STRESS U DHACAA? Marka ay kusoo wajahdo xaalad aadan fileyn oo aad dareento in ay kaa tanbadantahay ayaa maskaxda qaybta hypothalamus ka loo yaqaano waxa ay amreysaa in jirka loo soo sii daayo dheecaanada Stress ka, Dheceenada walbahaarka ayaa dhamaan badalaya xaalada jirka […]
Waxaa inala kowsaday maalintii Ciidda oo ka dhigan waqtigii oo ka baxay xilli, galayna Waa’ kale oo aan sii soconayn wax ka badan maalin. Waa ammin kooban, wanaagsan, farxad badan oo ay diimuhu dadka ku waajibiyeen si ay dadku xilli ka xilli dib ugu noqdaan dabiicaddii ay ka guureen. Waa maalin nabagalyo, dhoollabirayn, qosol, oofin, […]
Dekadda iyo Horseed yaa adkaan doono beri galab
Cabdi Joon iyo Yuu Cali oo beri galab isku dhegan markii ugu horeysayna ku wada kulmi doona Tartanka Star League oo Sanadkaan la bilaabay markii ugu horeysay. Labada Macalin ayaa garoon isla soo wada galay Yarantoodii ayadoo sidoo kale dhowr Jeer ay wada Ciyaaren ayagoo sidoo kale ah laba Macalin.
QADAR AIRWAYS AYAA DUULIMAAD TOOS AH KA BILLOWDAY..
Shirkadda Diyaaradda Qatar Airways ayaa duulimaad toos ah ka billowday caasimada Somalia ee Muqdisho.Duulimaadkan joogtada ah oo marinkiisu noqon doono MUQDISHO TO DOHA, DOHA TO MUQDISHO ayaa ahaa mid muddo dheer laga soo shaqeynayey sida ay sheegeen masuuliyiinta dowladda, waxayna Muqdisho iman doonta todobaadkiiba saddex jeer.Qatar Airweys ayaa noqon doonto shirkadii afaraad ee duulimaad caalami […]